I-rose yaseCanada ayiyona inkambinkimbi enzima njengama-roses ajwayelekile. Ihambisana kahle nezimo ezinzima nezibandayo. Lokhu kungenxa yokuthi ama-roses we-tea-hybrid azwela emakhazeni abandayo futhi athula kakhulu. Ngenxa yalokhu, kunzima ukuhlakulela ebandleni eliphakathi - njalo kunzima kakhulu ukubikezela ukuthi lesi sitshalo siyosinda kanjani ebusika. Kodwa ubuhle obusenyakatho (yile ndlela amaRose aseCanada abizwa ngayo ngokuthi uWilliam Baffin) ahlala njalo, ukungahloniphi kwawo kanye nobunzima bebusika kunomlando. Futhi ukubukeka kwalezi zimbali akusilo phansi kunezinye izihlobiso zensimu yakho yembali.
I-roses yasePanada yama-paris ayinhlabelo encane kunaleyo evamile, ishaya noma isinamathele. Kodwa lokhu ngeke kukuvimbele ekuthandeni. Ama-roses ama-roses anjalo awahle amahle kakhulu - awakhulu futhi angaziqhayisa ngombala ogcwele kakhulu. Esigabeni esiphakathi saseRussia, bangaqhakaza kabili ngonyaka. Nakuba okwesibili futhi hhayi kakhulu. I-rose yaseCanada inhle futhi izithelo zayo - uma ingasusiwe ngemuva kokuphela kwezimbali, bese kuthi ekwindla ithululwa, ithola umbala ogqamile futhi ibheke ukuhlobisa. Ngendlela, akufanele bavikeleke ebusika - impahla engavamile yalezi zitshalo ezingenakuqhathaniswa. Kodwa-ke, enye yezinzuzo eziyinhloko, okuvezwa yiCanada phambi kwabalimi be-amateur, yizicucu ezinhle kakhulu nezinkinga. Lokhu kungukuthi, akudingeki ukuthi batshalwe emgodleni njengokujwayelekile, ukugxilonga noma ukukhuphuka. Ukuthengwa kwama-cuttings okuhlanganisiwe kuvame ukubiza abathandi beRose isamba esilungile. AmaCanada akuvumela ukuthi ulondoloze ngalokhu.
Okufanele ukwenze nge rose ngemva kokuthenga
Kodwa kunezinye izidingo zalokhu izitshalo. Kulula ukukhumbula. Emgodini wokufika, ozokhula i-rose rose yaseCanada, udinga ukuthulula i-peat, umquba, umlotha kanye ne-humus. Uma utshalwa, cabanga ukuthi isihlahla sizohlala ngamamentimitha amathathu kuya kwahlanu (ngoba inhlabathi izongena). I-rose yaseCanada idinga ukukhwela kanye kuphela - uma isitshalo esincane. Khona-ke ubusika kufanele kugcwale ingxube yesihlabathi nomhlaba. Eminyakeni elandelayo, lokhu ngeke kudingeke, njengoba kuzodingeka ukuguqulwa kwesiqu. Nakuba ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi ngesikhathi sasebusika ikakhulukazi ebandayo, ihlumela lingase liqhwale kuze kube sezingeni lapho limbozwe khona iqhwa. Kodwa-okuyinto ehlaba umxhwele - emva kwalokho ikhula ngokugcwele futhi ibe mkhulu kakhulu!
Gcwalisa lezi roses bese uzicubungula for prophylaxis ukuvikela ngokumelene nama-parasites kanye nabanye abameleli balezi zinhlobo. Kubalimi abaqalayo, izinhlobo ezinjengo-Modern Centennial no-Alexander McKenzie ziphelele. Zibukeka zinkulu ngokunakekelwa okuncane futhi zihlobisa kokubili ingadi yembali kanye nenkundla, ngaphandle kokudinga isikhathi esiningi. Ngaphandle kokuthi udingeke uqiniseke ukuthi umthunzi omnyama uwela ezihlahleni - uma kungenjalo ilanga elikhanyayo izimbali zingashisa emaphethelweni futhi zilahleke kancane. I-Adelaide Hoodless yi-rose ephansi yaseCanada enezimbali ezinombala obomvu kakhulu. Ama-Inflorescences amakhulu. UDavid David Thompson ufana kakhulu nenja ejwayelekile. Kuhle okuhle ngocingo. Ukumelana kakhulu nezifo. Izimbali zine pink elula, bheka kancane kancane.
Izilokotho zosuku lokuzalwa izingane - abazali umsebenzi
Ikhukhamba isisindo ukulahleka: Ukudla. Ukulahlekelwa isisindo ngosizo ikhukhamba
Dachshund: ukubuyekezwa abanikazi. yemifino Dachshund: Izibuyekezo
Abantu Cynical. Akuve kuyingozi?